लकडाउन खुकुलो हुँदैमा मास्क नखोलौ : लकडाउन खुकुलो हुँदैमा मास्क नखोलौ :
लकडाउन खुकुलो हुँदैमा मास्क नखोलौ
पासाङ तामाङ लेखक
६ असार २०७७, शनिबार १३:१० । ईलाम
आज विश्व कोरोनाको महामारीबाट आतंकित मात्र हैन यसले बिस्तारै बिस्तारै विश्वलाई नै शिथिल बनाउदै लगिरहेको छ । मानवीय क्षति सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक क्षति पनि अतुलनीय हुने नै भयो । डिसेम्बरको अन्तिम दिन अर्थात डिसेम्बर ३१, २०१९ । जब चीनको वुहान प्रान्तमा मान्छेहरु कोभिड–१९ को विरुद्धमा लड्दै थिए, हजारौं संख्यामा संक्रमित बढ्दै थियो, सयौंको ज्यान जाँदै थियो, विश्वले कुनै पनि चासो दिएन । पूर्व तयारीमा जुटेन । धेरै देशहरु रमिते बनेर बसे । हाम्रोजस्तो मुलुकको के कुरा गर्नु विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र भनाउँदाहरुले बरु उल्टै यसलाई चिनी भाईरसको संज्ञा दिदै मजाक उडाए । कतिपयले त चिनिया खानपानको कारणले फैलिएको भनेर दोषारोपन समेत गरे । भाइरसले आजको रुप लिन्छ भनेर कसैले आँकलन नै गर्न सकेन । अन्ततोगत्वा यो भाईरस विश्वको हरेक कुनाकुना फैलिएर हाम्रो घरदैलोमा समेत आईपुगे । माहामरीको रुप लिए । वर्तमान मानव सभ्यताले नदेखिएको बिकराल प्रकोपको सामना गर्न बाध्य बने ।
आज विश्वभर ८,६६३,१३५ संख्यामा संक्रमित पुगिसकेका छन् ।भने ४६०,००५ जना मृत्युको मुखमा पुगिसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा ८२७४ संक्रमित साथै २२ जनाले ज्यान गुमाईसकेको अवस्था छ । दिन दुईगुणा रात चौगुणा संक्रमण फैलिरहेको तथ्याङ्क बाहिरिदैंछ ।
संसारलाई एक सेकेन्डमा ध्वस्त बनाउने मिसायल बनाउन सक्ने शक्तिशाली राष्ट्र पनि आज कोरोनाको औषधिको अभावमा घुँडा टेके । आखिर शक्तिशाली भनाउँदा राष्ट्रहरुले पनि मान्छेको विनाश र प्रकृतिको विनाशमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने बाहेक अरु के नै पो गर्दोरहेछ र भन्ने छर्लंग देखियो । नत्र विनाशकारी मिसायल बनाउनेहरुले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन किन सकेनन् रु आज विज्ञानलाई समेत चुनौती भएको छ । औषधिको अभावमा लाखौंलाख मानिस मृत्युको मुखमा पुगे । घरभित्र लुक्न बाध्य बने । को सम्पन्न रु को विपन्न रु को शक्तिशाली रु को शक्तिहिन रु सबैको हैसियत एउटै रह्यो । सबैजना आफ्नो ज्यान जोगाउन घरभित्र लुक्न पर्ने बनायो । आखिर हामी सबैको धरातल एउटै रहेछ भन्ने कुराको साबित भए ।
यसको अरु औषधि छैन । घर बाहिर ननिस्कनु, बेलाबेला साबुन पानीले मिचिमिची हात धुनु, मास्कको उचित प्रयोग, सेनिटाईजरको प्रयोग अनि सामाजिक दुरी कायम राख्नुबाहेक अरु नयाँ विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
सुरुवातीमा नै ध्यान नदिएको कारणले संक्रमितको संख्या चौतपर्फी बढेको हो । अनियन्त्रित भएको हो । शक्ति सम्पन्न देशहरुले पनि लाखौंको संख्यामा मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको हो । यी दृश्यहरु हाम्रो आँखा अगाडि जग जाहेर नै छ । जुन जुन राष्ट्रहरुले संक्रमणको शुरुवातदेखि नै सतर्कता अपनाए, नागरिकलाई न्युनतम आवश्यकताको सामग्रीहरु पुरा गर्दै लकडाउनको पुर्ण पालना गर्न अभिप्रेरित गरे, नागरिकले पनि सरकारले दिएको निर्देशनलाई आफ्नो दायित्व सम्झदै परिपालना गरे । ती देशहरूले अप्रत्यासित घटना बेहोर्नु परेन ।
हाम्रो मुलुकमा न राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखियो, न नागरिकको नै । यसैको परिणामस्वरूप आजको यो संक्रमणको गति तीब्र देखिन थालेको छ । यदि यहीँ गतिले निरन्तरता पायो भने हाम्रो मुलुकले उच्च मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । दुर्भाग्यको यी दिन देख्न अब धेरै दिन कुर्नु पर्दैन ।
अहिलेसम्म कोभिड– १९ को औषधि बनेको छैन । यसलाई फैलिनबाट रोक्ने विकल्प भनेको सामाजिक दुरी कायम राख्नु, बेलाबेला साबुनपानीले मिचीमिची हात धुनु, सेनिटाईजरको प्रयोग गर्नु, मास्कको उचित प्रयोग गर्नु हो भनेर सम्बन्धित विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
हिजो एकजना पनि संक्रमित नदेखिदा नै कडा लकडाउन सुरु गरेको सरकारले आज संक्रमणको तीब्र गतिसँगै लकडाउन खुकुलो गरेको छ । हिजो एक जना संक्रमित हुँदा भागदौड गरेर गाउँ पस्ने, त्रसित भएर घरभित्र बस्ने त्यहीँ जनता आज लकडाउन खुकुलो हुने संकेत पाउन साथ सामाजिक दुरिको त कुरा छोडौ भएको मास्क पनि खोलेर सलबलाउन थालिसकेका छन् । वास्तवमा यो हामी आफ्नै लागि घातक हो ।
हिजो हामी जसरी गम्भीर भएको थियौ, आज हजारौंको संख्यामा संक्रमित बढिरहँदा, मृतको संख्या दिनदिनै थपिदै गर्दा हाम्रो सतर्कता कमजोर हुँदैछ । मानिस सबैभन्दा चेतनाशिल र विवेकी प्राणी भनिन्छ तर हामी किन छोटो मेमोरी भएको प्राणीमा दर्ता हुँदैछौँ रु यो नै गम्भीर चुनौतीको प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यसैले लकडाउनको उलंघन गर्दै नगरौं । मास्क खोल्ने दिन आएको छैन । अब चाहिँ झन लगाउने दिन आएको छ । हामी सचेत बनेर सुनौलो दिन रोज्ने कि विपतिपूर्ण दिन रोज्ने हाम्रै हातमा छ । समयमा सचेत हुन सकेनौ भने भोलि पश्चताप गर्ने मौका समेत हुने छैन ।
विपतको घडीमा सरकार र जनता दुबैको भुमिका सराहनीय र सकरात्मक भए मात्र जोगिन सक्छौं । दुबैमध्ये कुनै एकको भुमिका कमजोर भएमा त्यसबाट दुस्परिणाम बाहेक केही हात पर्ने छैन । यसको भागीदार हामी सबै हुनेछौं । यसैले हामी सबैले परिस्थिति अनुसारको आचरण गरौं आफू पनि बचौ, अरुलाई पनि बचाऔं । लकडाउन खुकुलो हुदैमा हामीले सम्बन्धित विज्ञले दिएको सुझाव र सल्लाहालाई नबिर्सिउ ।
सुर्याेदय नगरपालिक – ३
व्हारिस्हुङ : जमिनलाई दिइने बलिपूजा
तामाङ संस्कृतिको मौखिक परम्परा अध्ययन अनुभव
तामाङ डायस्पोरा एकरुपताको डायस्पोरा होइन
मौलिकताको खोजी : सकसपूर्ण यात्रा र तितो अनुभव
कोभिड १९ र तामाङ बालबालिकाको शिक्षा
बहस ३ : तामाङ विकासका मोडल
१. जाग्राम बस्नेका घरमा लक्ष्मीको प्रवेशःआकाशदीपदान शनिबारदेखि
२. दुईको मृत्यु
३. र्यापर भिटेनलाई पक्रन आदेश
४. कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति लीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा पुनः जेल सजाय
५. मेक्सिकोमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख नाघ्यो, ९० हजारको मृत्यु
६. दशैँमा आपराधिक घटना न्यून